किन बाथरूममा सबैभन्दा बढि हर्टअट्याक हुने गर्छ, यस्ताे छ कारण ! – List Khabar
Home / समाचार / किन बाथरूममा सबैभन्दा बढि हर्टअट्याक हुने गर्छ, यस्ताे छ कारण !
admin December 18, 2021 समाचार Leaveacomment 471 Views
किन बाथरूममा सबैभन्दा बढि हर्टअट्याक हुने गर्छ, यस्ताे छ कारण ! मानिसको लागि अहिले हर्टअट्याक गम्भीर समस्या बन्दै आएकाे छ । हर्टअट्याक अचानक हुन्छ तर यो खराब लाइफ स्टाइल र खानपानको कारण हुने गर्दछ ।
विज्ञानको आधारमा हेर्दा हर्टअट्याकको सम्बन्ध हाम्रो रगतमा हुन्छ। रगत मार्फत हाम्रो शरीरमा अक्सीजन र जरूरी पोषक तत्व पुग्छ। तर जब तपाईको हृदयसम्म अक्सीजन पुग्ने धमनिमा प्ला-क ज-मेको कारण रु-कावट पैदा हुन्छ, यस कारण मुटु धड्किने रफ्तार असन्तुलित हुन्छ। र यसबाट नै हामीलाई हर्टअट्याक आउने गर्छ ।
बाथरूममा हर्टअट्याक हुनुको धेरै कारण रहेको छ, यदि तपाईले यस बारेमा जानकारी पाउनुभयो भने आफु र आफ्नो परिवारलाई यसबाट सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। बिहानको समयमा बाथरूममा हर्टअट्याक किन आउँछ, यस्ताे छ कारण:-
​१) बिहानको समयमा हाम्रो ब्लड प्रेशर धेरै हुन्छ। यस्तैमा हामी जब नुहाउनको लागी अधिक चिसो वा तातो पानी टाउकोमा हाल्छौ तब यसले ब्लड प्रेशरमा प्रभावित हुन्छ। यसैकारण हर्टअट्याकको जोखिम बढि हुन्छ ।
२) बिहानको समयमा जब हामी शौचालय जान्छौ तब हामी पेट पुरै तरिकाले सफा राख्नको लागि प्रेशर लगाउछौ। अधिक प्रेशर लगाउदा हाम्रो मुटुमा अधिक दवाब बन्छ जसका कारण हर्टअट्याक आउन सक्छ ।
​३) बाथरुमको तापमान घरको अरु ठाउँभन्दा निकै चिसो हुन्छ। यस्तो स्थिति शरीरको तापमानलाई सन्तुलित गर्न र रगत प्रवाह गर्नलाई अधिक कार्य गर्नुपर्छ। यसकारण हर्टअट्याक आउन सक्छ।
हर्टअट्याकबाट बच्ने यस्ता केही तरिकाहरु निम्न छन्:-
१) यदि नुहाउने समयमा अधिक समयसम्म बाथ टब वा पानीमा रहनुभयो भने यसको असर धमनिमा पर्छ । यस्तैमा अधिक समयसम्म बाथ टबमा नबस्नुहोला । २) पेट सफा गर्नको लागि अधिक जोर नलगाउनुहोला वा हतार नगर्नुहोला ।
३) बाथरुममा नुहाउने समयमा पानीको तापमानको ध्यान राख्दै सबैभदा पहिला खुट्टा भिजाउनुहोला । त्यसपछि टाउकोमा हल्का पानी हाल्नुहोला । यो तरिकाले पनि बच्न सक्नुहुन्छ । ४) अधिक समयसम्म एउटै पोजिशनमा नबस्नुहोला । यस तरिकाले तपाई हर्टअट्याकबाट बच्न सक्नुहुन्छ।
Previous दुर्लभ सालकलाई करोडमा बेच्न खोजेको आरोपमा काठमाडौंबाट एक पक्राउ
Next ​जाडोमा कुर्कुच्चा फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? फुटेको कुर्कुच्चा सन्चो बनाउने घरेलु उपाए, जानी राखौँ..?